March 2017 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 30, 2017 laravel No comments
Download wamp: http://www.wampserver.com/en/
Download and extract cmder mini: https://github.com/cmderdev/cmder/releases/download/v1.1.4.1/cmder_mini.zip
Update windows environment variable path to point to your php install folder (inside wamp installation dir) (here is how you can do this http://stackoverflow.com/questions/17727436/how-to-properly-set-php-environment-variable-to-run-commands-in-git-bash)
cmder will be refered as console
##Mac Os, Ubuntu and windows users continue here:
Createadatabase locally named homestead utf8_general_ci
#####You can now access your project at localhost:8000 :)
If for some reason your project stop working do these:
Credit to https://gist.github.com/hootlex/da59b91c628a6688ceb1#file-laravellocal-md
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, March 29, 2017 kali linux broghtness screen No comments
First open the terminal and type
dpkg -i xcalib_0.8.dfsg1-2_amd64.deb
If you want to dim or decrease the light then press in terminal
xcalib -co [how much percent you want to increase] -a
For reset the brightness
Kali linux 20162No sound | How to fix sound issue on kali linux 2016 2
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, March 29, 2017 kali linux sound fix No comments
1. pulseaudio -D
2. gedit .bashrc
3. and add this commands line to notepad
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, March 26, 2017 Ubuntu No comments
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Monday, March 20, 2017 LearningEnglish No comments
(52) Minister = ၀န်ကြီး
(53) Deputy Minister = ဒုတိယ၀န်ကြီး
(54) Prime Minister = ၀န်ကြီးချုပ်
(55) President = သမ္မတ
(56) Vice President =ဒုတိယသမ္မတ
(57) Pyidaungsu Hluttaw Speaker = ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက
(58) Pyithu Hluttaw representative = ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
(59) Mayor = မြို့တော်ဝန်
(60) Consulate General =ကောင်စစ်ဝန်
(61) Ambassador = သံအမတ်
(62) Ambassadress = အမျိုးသမီး သံအမတ်
(63) Intelligent Officer = ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ
(64) Inspector = ရဲအုပ်
(65) Sub-Inspector = ဒု-ရဲအုပ်
(66) Police Station Officer = စခန်းမှူး
(67) Surveillance Officer = နယ်ထိန်း အရာရှိ။
(68) Police Warrant Officer = ရဲအရာခံ (မှုခင်း)
(69) Police Sergeant = ရဲတပ်ကြပ်ကြီး
(70) Bobby =ရဲသား
(71) Buddy = ရဲဘော်
(72) Township Officer = မြို့နယ်မှူး
(73) Assistant Township Officer = လက်ထောက်မြို့နယ်မှူး
(74) Deputy Township Officer = ဒုတိယ မြို့နယ်မှူး
(75) Immigration Officer = လ၀ကမှူး
(76) Deputy Assistant Immigration Officer = ဒု လ/ထ လ၀ကမှူး
(77) Chairman/President = ဥက္ကဋ္ဌ
(78) Director General = ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(79) Managing Director = ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေး မှူး
(80) Director = ညွှန်ကြားရေးမှူး
(81) Deputy Director = ဒု ညွှန်ကြားရေးမှူး
(82) Assistant Director = လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
(83) Secretary = အတွင်းရေးမှူး
(84) Joint Secretary = တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး
(85) General Manager = အထွေထွေမန်နေဂျာ
(86) Chief Officer = ဦးစီးမှူး
(87) Member = အဖွဲ့ဝင်
(88) Circle Officer = တိုက်နယ်အရာရှိ
(89) Officer In Charge = တာဝန်ခံ အရာရှိ
(90) Supervisor = ကြီးကြပ်ရေးမှူး
(91) Supervisor In Charge = ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံ
(92) Township Medical Officer (TMO) =မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဋ္ဌာန မှူး၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်
(93) Station Medical Officer = တိုက်နယ်ဆရာဝန်
(94) Township administrator = မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
(95) Village administrator = ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
(96) 100 Houses Group Elder = ရာအိမ်မှူး
(97) 10 Houses Group Elder = ဆယ်အိမ်မှူး
(98) Town's Elder = မြို့မိမြို့ဖ
(99) Street Elder = လမ်းမှူး
(100) Ward Elder = ရပ်ကွက်မှူး
(101) Village Head Man = ရွာသူကြီး
(102) Trustee = ဂေါပက
(103) Chief Justice of the Union = နိုင်ငံတော် တရားသူကြီးချုပ်
(104) Attorney General = နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ်
(105) Sessions Judge = စက်ရှင် တရားသူကြီး
(106) Additional Sessions Judge =ရာဘက်စက်ရှင် တရားသူကြီး
(107) Additional District Magistrate = ရာဘက် စက်ရှင်တရားသူကြီး
(108) Government Advocte = တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ
(109) Barrister at Law = ၀တ်လုံတော်ရ
(110) Doctor of Law = ဥပဒေပါရဂူ
(111) Notary Public = စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာ ရှေ့နေ
(112) Higher Grade Pleader = အထက်တန်းရှေ့နေ
(113) Lawyer = ရှေ့နေ
(114) Judge / Adjudicator= တရားသူကြီး
(115) Appraiser = ရာဘက်တရားသူကြီး
(116) First Class Power Magistrate = ပထမတန်း အာဏာရတရားသူကြီး
(117) Special Power Magistrate = အထူးအာဏာရ ပြစ်မှုတရားသူကြီး
(118) Higher Authority = အထက်အာဏာပိုင်
(119) Superior Officer = အထက်အရာရှိ
(120) Patron = နာယက
(121) Administration Officer = သင်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
(122) Jailor = ထောင်မှူး
(123) Accused =တရားခံ
(124) Complaint/ Plaintiff = တရားလို
(125) Petition Clerk = လျှောက်လွှာစာရေး
(126) Bailiff = ဘီလစ်စာရေး
(127) Judicial Office Grade (3) = တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့် ၃
(128) Civil Service = နိုငငံဝန်ထမ်း
(129) Bishop / Arch Bishop = ဂိုဏ်းချုပ်
စုတုပြုထားတာ ကြာလှ ပြီ
ခုမှ တစ်ခေါက် ပြန်တင်ဖြစ်တယ်
Credit : Tr Khin Thuzar Myint
IELTS / TOEFL Expert
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, March 19, 2017 News No comments
ကျိုက္ခမီမြို့ အောင်သုခရပ်ကွက် မကျီးချောင် ၅လမ်းနေ ဒေါ်ဝင်းကြည် မှာကျန်းမာရေး အခြေအနေမကောင်းပါသဖြင့် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူရန် အလှူငွေကျပ် (၆သောင်း)ကို ဟိတကာရီ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များနာရေး ကူညီမှုအသင်း မှ လူနာရှင်ထံသို့အား ကူညီထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဝေဒနာခံစားနေရသူဒေါ်ဝင်းကြည်အမြန်ဆုံးသက်သာကောင်းမွန်ပါစေဟု ဟိတကာရီ နာရေးကူညီမှုအသင်း မှ မေတ္တာပို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... 👐👐👐 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
ဟိတကာရီ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များနာရေး ကူညီမှုအသင်း သို့ အလှူ ငွေများ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုပါက...
ကိုပြည်စိုး (ထက်ထက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး) 09449251311
မခင်မေထွန်း...... 09785429837....သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
တက်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန် လှူဒါန်းလိုသူဆီသို့ရောက်နိုင်အောင် LIKE &amp; SHARE လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကုသိုလ်ယူသွားကြပါရန်။ နှင့် ပါဝင်ကူညီကြပါရန်။
Credit to : ဟိတကာရီ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များနာရေးကူညီမှုအသင်း
၁၆ရက်နေ့ ၃လပိုင်း ၂၀၁၇ ချဲ၃လုံးဂဏန်း ၈၆၃ ထွက်သွားပါပြီး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 16, 2017 Lottery No comments
၁၆ရက်နေ့ ၃လပိုင်း ၂၀၁၇
ချဲ၃လုံးဂဏန်း ၈၆၃ ထွက်သွားပါပြီး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, March 11, 2017 LearningEnglish No comments
က = K ခ = Kh K = ခ ဂ,ဃ = G င = Ng
စ,ဆ = S ဇ,ဈ = Z ည = Ny
ဋ,တ = T ထ,ဌ = Ht ထ,ဋ္ဌ = T ဒ,ဓ,ဍ, ဎ = D န,ဏ = N
ပ = P ဖ = Ph ဗ,ဘ = B မ = M
ယ = Y ရ = R လ,ဠ = L ၀ = W သ = Th ဟ = H
a=အ , အာ, အား i = အိ, အီ , အီး u= ဥ, ဦ, ဦး
(ar=အာ, အား) (ee= အီ, အီး) (oo= ဦ ,ဦး)
e = အေ ,အေ့ , အေးe= အဲ , အဲ့ , အယ်
(ay-aye= အေ ,အေ့ , အေး) (ai = အဲ , အဲ့ , အယ်)
aw =အော့ ,အော် , အော an =အံ , အံ့
၁။ ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ Y ဆက်ပေးလျှင် “ယပင့်” “ရရစ်” ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Ky= ကျ ,ကြ Py=ပျ ,ပြ By=ဗျ ,ဗြ Gy=ဂျ Phy=ဖျ ,ဖြ My=မျ,မြ
၂။ ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ W ဆက်ပေးလျှင် “၀ဆွဲ” ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Kw=ကွ Khw=ခွ Gw=ဂွ Sw=စွ,ဆွ Zw=ဇွ ,ဈွ Lw=လွ Ngw=ငွ Dw=ဒွ
၃။ဗျည်းတစ်လုံးရှေ့မှ H ထား၍ရေးလျှင် “ဟထိုး”ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Hng=ငှ Hny=ညှ Hn=နှ,ဏှ Hm=မှ
၄။ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ Y,W ဆက်ပေးလျှင် “ ယပင့် ၀ဆွဲ” “ရရစ် ၀ဆွဲ” ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Kyw= ကျွ , ကြွ Pyw= ပျွ ,ပြွ Myw= မျွ , မြွ
၅ ။ ဗျည်းရှေ့က H နှင့် ဗျည်းနောက်က Y ဆက်ပေးလျှင် “ယပင့်ဟထိုး” “ရရစ်ဟထိုး” ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Hmy=မျှ , မြှ Hly=လျှ
၆။ဗျည်းရှေ့က H နှင့် ဗျည်းနောက်က W ဆက်ပေးလျှင် “ဟထိုးဝဆွဲ” ဖြစ်၏။
ပုံစံ။ ။ Hnw=နွှ Hlw=လွှ Hmw=မွှ
— at အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်-ရွှေအိမ်စည်.
et= က် in= င့် it =စ် i , ee = ည် int = င့် an = န် , မ် ai (e) = ယ် at = တ်, ပ် ant = န် , မ့်
eik = -ိ တ် -ိပ် ( လုံးတင်တသတ် လုံးတင် ပသတ်)
ein = -ိန် -ိမ် ( လုံးတင်နသတ် လုံးတင်မသတ်)
ok(oke)= -ုတ် , -ုပ် (ချောင်းငင်တသတ် ,ချောင်းငင်ပသတ်)
ont(one , ohn -ုန် , -ုမ် (ချောင်းငင်နသတ် ,ချောင်းငင်မသတ်)
aik= -ိုက်(လုံးတင်ချောင်းငင်ကသတ်)
aine , (ine)= -ိုင် (လုံးတင်ချေင်းငင်ငသတ်)
o , ( oe , oh -ို (လုံးတင်ချောင်းငင်)
ဗျည်း - ဗျည်းတွဲ နှင့် သရပေါင်းပုံနမူနာ
Ka = က ကာ ကားKi = ကိ ကီ ကီး Ku= ကု ကူ ကူး
Ke =ကေ ကေ့ ကေး Ke,=Kai ကဲ ကဲ့ Kaw = ကော့ ကော် ကော
Kan =ကံ ကံ့ (Kant = ကံ့ ) Kya = ကျ ကျာ ကျား Kyi = ကျိ ကျီ ကျီး
Kyu = ကျု ကျူ ကျူးKye = ကျေ့ ကျေ ကျေး Kye,(Kyai) = ကျဲ ကျဲ့ 
Kyaw= ကျော ကျော့ ကျော် Kyan= ကျံ ကျံ့ (Kyant =ကျံ့) Kwa = ကွ ကွာ ကွား
Kwai= ကွိ ကွီ ကွီး Kwe =ကွေ့ ကွေ ကွေး Kwe ,( Kwai )=ကွဲ , ကွဲ့
Kun=ကွံ , ကွံ့ (Kwan ဟုမရေးရ)
Ket = ကတ် Kin = ကင့် ကင် ကင်း ( Kint = ကင့် ) Kit = ကစ်
Ki (Kee)= ကည် ကည့် ကည်း Kat =ကတ် ကပ် Kan =ကန့် ကန် ကန်း , ကမ့် ကမ် ကမ်း
K (Kant= ကန့် ကမ် ) Kai,(Ke)=ကယ် ကယ့် Kyet = ကြက်
Kyin= ကြင် ကြင့် ကြင်း (Kyint) =ကြင့် Kyit =ကြစ်
Kyi , (Kyee) = ကြည့် ကြည် ကြည်း Kyat =ကြတ် ကြပ်
Kyan = ကြန် ကြန့် ကြန်း ၊ ကြမ် ကြမ့် ကြမ်း K (Kyant) = ကြန့် ကြမ့်
Kyai , (Key) = ကြယ် ကြယ့်
Keik =ကိတ် ၊ ကိပ် Kein = ကိန် ကိန့် ကိန်း , ကိမ် ကိမ့် ကိမ်း Keint =ကိန့် ကိမ်
KoK , (Koke) = ကုတ် ကုပ် Kon , (Kone , Kohn ) = ကုန် ကုန့်ကုန်း ၊ ကုမ် ကုမ့် ကုမ်း
Kont = ကုန့် , ကုမ့် Kauk= ကောက် Kaung= ကောင် ကောင့် ကောင်း
Kaik= ကိုက် Kaing , ( Kine ) = ကိုင် ကိုင့် ကိုင်း Ko ,( Koe ) =ကို ကို့ ကိုး
Kyeik= ကြိတ် ကြိပ် Kyein = ကြိန် ကြိန့် ကြိန်း, ကြိမ် ကြိမ့် ကြိမ်း ၊ (Kyeint =ကြိန့် ကြိမ့်)၊
Kyok , (Kyoke)= ကြုတ်၊ ကြုပ် Kyon , (Kyone , Kyohn) = ကြုန် ကြုန့် ကြုန်း , ကြုမ် ကြုမ့်ကြုမ်း
(Kyont= ကြုန့် ကြုမ်) ၊ Kyaik= ကြိုက် ၊ Kyaing (Kyine) = ကြိုင် ကြိုင့် ကြိုင်း ၊ Kyo ( Kyoe ) = ကြို ကြို့ ကြိုး ။
မှတ်ရန် ။ ။ (က)ချ ၊ ခြ ကို Khy ဖြင့် မရေးရ ၊ Ch ဖြင့်ရေးရမည်။
(ခ) ယှ ၊ ရှ ကို Hy , hr ဖြင့် မရေးရ ၊ Sh ဖြင့်ရေးရမည်။
(ဂ) ၀ဆွဲ နသတ် အတွက် un ကိုသုံးရမည်။ “ထွန်း” ကို Tun ဟုရေးရမည်။Twan ဟုမရေးရ။
(ဃ) ၀ဆွဲတသတ်ကို ut ဖြင့်ရေးရပည်။ “ထွတ်” ကို Kut ဟုရေးရမည်။ Twat ဟုမရေးရ။
(င) ထ = Ht အစား T တစ်လုံးတည်းဖြင့် လည်း ရေးကြသည်။ ဖ= Ph အစား P တစ်လုံးတည်း ဖြင့် လည်းရေးကြသည်။ ဥပမာ - မောင်ထင် = Mg Tin ။ ဦးဖေ = U Pe စသည်ဖြင့်ရေးသားကြသည်။ ခ = Kh အစား K တစ်လုံး တည်း ရေးသားကြသည်။ ဥပမာ - Ma Kin =မခင်။
မြန်မာဘာသာတွင် စာရေး အမှန် ၊ စာဖတ်အသံ ဟုဆိုသည့်အတိုင်း ရေးသောအခါ သတ်ပုံ မှန်အောင်ရေး၍ ဖတ်သောအခါ အသံကို အများ ဖတ်နေကျအသံအတိုင်း ဖတ်ကြရသည်။
ညောင်လေးပင် ကို ညောင်လေးဘင်ဟုဖတ်၍
ရေကျော် ကို ရေဂျော် ဟုဖတ်၏။
မန္တလေး ကို မန်းဒလေး ဟုဖတ်၏။
ကြားတောရလမ်း ကို ဂျားတောရလမ်း ဟုဖတ်၏။
သို့ရာတွင် အထက်ပါနာမည်များကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရေး သား သောအခါသတ်ပုံအမှန်ကိုမကြည့် ဘဲအသံထွက် အတိုင်း (၀ါ) ဖတ်သည့် ပြောသည့် အသံအတိုင်း လိုက်၍ ရေးရကြောင်း အထူးသတိပြု ရပေမည်။
ညောင်လေးပင် = Nyaunglebin
ကြားတောရလမ်း = Gyatawya Street
၁။ မြန်မာလူနာမည်များကိုရေးရာ၌အသံထွက်စာလုံးတိုင်းကို Capital Letter ခေါ် စာလုံးကြီးဖြင့်စ၍ရေး ရမည်။စာလုံးပေါင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်မရေးရ။
ပုံစံ။ ။ Maung Thaung Lwin =မောင်သောင်းလွင်
Ma Tin Yee = မတင်ရီ
U Aye Maung = ဦးအေးမောင်
Daw Mya Kyi = ဒေါ်မြကြည်
Khin Soe Myint = ခင်စိုးမြင့်
Ma Than Hlaing = မသန်းလှိုင်
၂။ ဘုန်းကြီး သီလရှင်တို့ ဘွဲ့နာမည်များတွင် ရှေ့ဆုံး အက္ခရာတစ်လုံးကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့်ရေး၍ တဆက်တည်း စာလုံးပေါင်းရမည်။( လူကဲ့သို့ တစ်လုံးချင်းမရေးရ ၊ မှားတတ်သည်။)
ပုံစံ။ ။Ashin Thumana =အရှင်သုမန
U Khemeinda = ဦးခေမိန္ဒ
ဆရာတော် ဦးဉာဏ ။ (Ven U Nyana ကို Venerable - ဗင်း- န်ရ်ဘဲလ် ဟုပြောရဖတ်ရသည်။ ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် ဘုန်းကြီးဘွဲ့ရှေ့တွင် ထားရေးကြသည်။
U Khemeinda =ဦးခေမိန္ဒ
၃။ ရာထူးအလုပ်အကိုင်တို့ကို နာမည်ရှေ့က ထည့်၍ ခေါ်ဝေါ်ရေးသားသောအခါ ၄င်းရာထူးအလုပ်အကိုင်၏ အစဆုံးအက္ခရာတစ်လုံးကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးရ၍တဆက်တည်းစာလုံးပေါင်းရသည်။
ပုံစံ။ ။ ဆရာမ Sayama Ma Tin Yee =မတင်ရီ
Sayagyi U Aye Maung = ဆရာကြီးဦးအေးမောင်
Saya U Kyaw Tint= ဆရာဦးကျော်တင့်
Bogyoke Aung San=ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
Yebaw Kyaw Win= ရဲဘော်ကျော်ဝင်း
Sayadaw U Zawtika= ဆရာတော်ဦးဇောတိက
Phongyi U Khemeinda= ဘုန်းကြီးဦးခေမိန္ဒ
Ubazin U Nyana=ဦးပဉ္စင်းဦးဉာဏ
Koyin Shin Kethara= ကိုရင်ရှင်ကေသရ
Sayagyi Daw Thilasri = ဆရာကြီးဒေါ်သီလစာရီ
Syalay Daw Nyanawadi=ဆရာလေး ဒေါ် ဉာဏ၀တီ
၄။မြို့ ရွာ လမ်း အဆောက်အအုံ၏ အမည်များတွင် အစဆုံးအက္ခရာတစ်လုံးကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့်ရေး၍ တဆက်တည်းစာလုံးပေါင်းရသည်။အသံထွက်အတိုင်းစာလုံးပေါင်းရသည်။
ပုံစံ။ ။ Pyuntaza = ပြွန်တန်ဆာ
Seikpyangyi Village= ဆိတ်ပြန်ကြီးရွာ
Lay- ein Zu Village= လေးအိမ်စုရွာ
Gyatawya Street =ကြားတောရလမ်း
Sulay Pagoda= ဆူးလေဘုရား
၅။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် နာမ်ပုဒ်များကို စုပေါင်း၍မှည့်ခေါ်ထားသော အဆောက်အအုံ ၊ အသင်း ၊ရုံး ၊ ရာထူး အမည် များတွင် နာမ်ပုဒ် တိုင်း ကို စာလုံးကြီး ဖြင့် စရေးရမည်။
ပုံစံ ။ ။ Bahan State High School =ဗဟန်းအစိုးရအထက်တန်းကျောင်း။
World Peace Pagoda= ကမ္ဘာအေးဘုရား
Union Bank of Myanmar=ပြည်ထောင်စုဘဏ်တိုက်
National Housing Board= ပြည်သူ့အိုးအိမ်အဖွဲ့
Buddhist Scholar Society=ဗုဒ္ဓ၀ါဒသုတေသနအဖွဲ့
Member of Parliament = ပါလီမန်အမတ်
Deputy Commissioner = အရေးပိုင်
General Secretary = အကျိုးဆောင်ချုပ်
Prime Minister =၀န်ကြီးချုပ်
ရုံးကိစ္စလျှောက်လွှာများတွင် လူနာမည် ၊ မြို့ ရွာအမည်များ ကို ပုံနှိပ် စာလုံးကြီး သက်သက်ဖြင့် သာရေးသားကြလေသည်။လျှောက်လွှာများ၌( In Block Letters ) စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးပါဟု အထူးမှာ ထားတတ်ကြသည်။
ပုံစံ ။ ။ MAUNG WIN MAUNG =မောင်ဝင်းမောင်
MA MYA THAUNG = မမြသောင်း
MAUNG SEIN WIN = မောင်စိန်ဝင်း
MA TIN YEE= မတင်ရီ
KYUAKSE = ကျောက်ဆည်
Reference : New Method English Grammar By Ashin Thumana( B . A)469369807.1073741827.1609139446037776/1615693088715745/?type=3